Na June 16, Beijing nwere ọtụtụ ọgbakọ mkparịta ụka iji mee emume ncheta otu narị afọ nke ntọala Kọmunist nke China, "Beijing kwalitere nke ọma". Na nzukọ a, Kang Sen, osote odeakwụkwọ nke Kọmitii Ọrụ Ugbo na Ọrụ nke Obodo Beijing, osote onye isi t ...
A na -ejikarị kettle eletrik na ndụ anyị, gụnyere n'ụlọ ma ọ bụ n'ụlọ nkwari akụ. Mgbe anyị chọrọ mmiri ọkụ, ketulu eletriki nwere ike gboo mkpa anyị, mana ụfọdụ kettles eletrik na-abụghị ọkọlọtọ nwere ike bute anyị mmerụ ahụ, yabụ na ihu ụdị ngwa eletriki eletriki dị n'ahịa, gịnị ka anyị kwesịrị ime? ...
Ọnụ ego dị ọnụ ala nke itinye ego n'ụlọ nkwari akụ na ntiwapụ abịabeghị
Ọtụtụ ụlọ ọrụ nkwari akụ nke ụwa azabeghị nke ọma n'ọgba aghara nke ọrịa. Mana ha ka chọrọ ịkwalite echiche na ọ bara uru na netwọkụ ụwa karịa ka onye ọrụ nọọrọ onwe ya. Obere ndị ọrụ kwesịrị ịnabata echiche a iji weghara ohere ...
Kedu ka ndị na -emepụta ihe si agba mbọ hụ na nchekwa nke ihe nhicha ntutu
Echiche bụ isi n'azụ ndị na -ehicha ntutu dị mfe, mana imepụta otu maka oriri oke mmadụ chọrọ iche echiche siri ike gbasara atụmatụ nchekwa. Ndị na -emepụta ntutu na -ebu amụma ga -ebu amụma ka enwere ike isi were ihe nhicha ntutu ha. Ha na -agba mbọ chepụta ngwaahịa ga -adị mma na ụdịdị kacha ...
Bulgaria Hotels dị na ọnọdụ COVID-19: ka esi etinye akpachara anya
Mgbe ogologo oge nke enweghị mgbagwoju anya na oke ụjọ, oghere Bulgaria dị njikere ịnabata ebili mmiri nke ndị njem nlegharị anya nke oge a. Mkpachapụ anya metụtara ọrịa na-efe efe adịlarị bụrụ otu n'ime isiokwu a na-ekwukarị gbasara na Bulgaria. Ndị ahụ ...